Knowledge – santhit.com
ဖေ​ဖေ သမီး ဘုရား​ကို ​နောက်​တစ်​ခါ ထပ်​မသွား​တော့ဘူး
ဖေ​ဖေ သမီး ဘုရား​ကို ​နောက်​တစ်​ခါ ထပ်​မသွား​တော့ဘူး ဘာဖြစ်​လို့လဲ သမီး ဘုရား​ကို သမီးသွား​တော့ ​တွေ့တဲ့လူတိုင်းက ဘုရားဝတ်ပြုနေတဲ့ အချိန်မှာတောင်​ ဖုန်းသုံး​နေတဲ့သူနဲ့ အတင်း​ပြော​နေတဲ့သူနဲ့ ဘယ်​သူမှ တ​လေးတစား မရှိကြဘူး သူတို့​အားလုံးဟာ သူ​တော်​​ကောင်း​ယောင်​ ​ဆောင်​​နေကြတာပဲ ​ဖေ​ဖေ အင်း ဒါဆို သမီး ဘုရား​ မသွား​တော့ဖို့ မဆုံးဖြတ်​ခင်​ ​ဖေ​ဖေ သမီးကို တစ်​ခု​လောက်​ လုပ်​ခိုင်းလို့ရမလား ​ပြောကြည့်​​လေ ​ဖေ​ဖေ ဘာများလဲ ဒါဆို သမီး ဖန်​ခွက်​ထဲ ​ရေအပြည့်​ထည့်​ပြီး ဘုရားကို ၂…
Khant Hein January 27, 2018 January 27, 2018 Knowledge, Knowledge No Comments
ဘွဲ့ မရ ပညာမတတ်​လည်း အားမငယ်​ပါနဲ့(ဗဟုသုတရ​စေတာမို့ shareထားသင့်​တယ်​​နော်​)
ဘွဲ့ မရ ပညာမတတ်​လည်း အားမငယ်​ပါနဲ့(ဗဟုသုတရ​စေတာမို့ shareထားသင့်​တယ်​​နော်​) ZG “ရိုးသားတဲ့တောသား” ============== ( ပညာမတက်လဲ ကြိုးစားရင်ထက်မြတ်တယ် ) တောရွာလေး တစ်ရွာကနေအလွန်ရိုးသား တဲ့ လူငယ်လေးဟာ အလုပ်ရှာဖို့မြို့ကို တက်လာခဲ့တယ် ရှာရင်းရှာရင်းနဲ့ကုမဏီ”တစ်ခုရှေ့မှာ လူစုလူဝေးကြီးရှိနေတာ ကြောင့် မေးမိလိုက်တယ်” အကိုတို့ ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဗျ ? အေးးးညီ အလုပ်ရှောက်နေကြတာကွ ”မဟူရာ ကုမဏီလေကွာ ဝန်ထမ်းအသစ်ခေါ်နေတာ”ဟာဟုတ်လားးး ညီလဲအလုပ်ရှာဖို့ တောကတက်လာတာ အကိုရ အေးအေးဒါဆိုရှောက်ပေါ့ကွ ”ဒီက လစာကောင်းတယ် ညီရ”ဟုတ်ကဲ့အကို။ ဒီလိုနဲ့ အလုပ်ဝင်ရှောက် ဖိုင်တွေဘာတွေဖြည့်…
Khant Hein January 14, 2018 Knowledge No Comments
1980မှ 1995ကြားထဲ ​မွေးတဲသူ​တွေဖတ်​ဖြစ်​​အောင်​ဖတ်​ကြည့်​ပါ
ခဏလောက်လွမ်းရတာပေါ့ 2000 ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ကျွန်တော်တို့လို 1990 နှစ်ကာလအနီးတစ်ဝိုက်မှာ မွေးခဲ့တဲ့သူတွေ အတွက်တော့အရာရာထက်ပိုလွမ်းရတဲ့ နှစ်ကာလတွေပါပဲ။ အထူးသဖြင့် မြို့ကြီးပြကြီးတွေထက် နယ်မြို့သေးသေးလေးဆီမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူတွေ အတွက်လွမ်းရတဲ့ရနံ့က ပိုပေါနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက နွေဟာနေလိုမပူသေးပဲ ဆောင်းဟာနှင်းတွေနဲ့လင်းပွင့်နေတုန်းပါပဲ။ ညနေကျောင်းဆင်းတဲ့အခါ ဘောလုံးကန်ကြ တဲ့လူငယ်တွေလိုတာထက်ပိုများနေကြပြီး ကျူရှင်ချိန်တွေကလည်းအခုလောက် မပိသေးတဲ့နှစ်ကာလတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခေတ်ပေါင်းများစွာကို ငြင်းခုန်ရင်း သတ်ပုတ်ရင်း စည်းလုံးရင်း ဟိုဘက်ရက်ကွက် ဒီဘက်ရက်ကွက်တွေ အားကစားတစ်ခုခု ချိန်းကန်ရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်။ လိပ်ပြာတွေ ပုစဉ်းရင်ကွဲတွေတအားဖြတ်ပျံနေတဲ့ ကာလဆိုကုတင်အောက်က ဖုန်တက်နေတဲ့ ရစ်လုံးတွေထုတ်ကြမယ်။ ဆီစိမ်စက္ကူနဲ့လုပ်ထားတဲ့ခုတ်စွန်တွေ ကျန်ကျောင်းပုံပါ…
admin October 29, 2017 November 5, 2017 Knowledge, Knowledge No Comments
အစဉ်​​ရှောင်​ကြဉ်​ ကြရမည့်​ ဘုန်းကံနိမ့်​​စေ လာဘ်​ပိတ်​​စေ​သော အ​လေ့ဆိုးများ ၁။ ဘုရားခန်းတွင်​ လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​မအိပ်​ရ ၂။ ​ယောင်္ကျား၏ညာဘက်​တွင်​မိန်းမ မအိပ်​ရ ၃။ နံနက်​ ၄ခွဲမှ၆နာရီအတွင်းတွင်​ သာသနာ​စောင့်​နတ်​ နတ်​မင်းကြီး​လေးပါးသည်​လူအများ၏ ​ကောင်းမှု မ​ကောင်းမှုကိုကြည့်​ရှု​သောအချိန်​ဖြစ်​သည်​။ ထိုအချိန်​တွင်​ ​မေထုန်​မှီဝဲမှုကို အထူး​ရှောင်​ကြဉ်​ရမည်​။ ၄။ မိမိအိပ်​​သော ခုတင်​ထက်​ သို့မဟုတ်​အိပ်​ရာထက်​မြင့်​​သော​နေရာတွင်​ ထဘီတန်းမပြုလုပ်​ရ။ သား သမီး ​ခေါင်းရင်း မိဘ​ခြေရင်းတွင်​ မ​နေရ မအိပ်​ရ ၅။ မိမိအိပ်​ရာခင်းနှင့်​ပုဆိုး​စောင်​များကို မိမိအိပ်​​သော ​ခေါင်းအုံး​ပေါ်တွင်​ တင်​၍မထားရ ၆။ မိမိ​နေထိုင်ရာထက်​မြင့်​​သော ​နေရာတွင်​ဖျာ…
admin October 19, 2017 Knowledge No Comments
“ဘဝအတွက်လုပ်သင့်သော၂၇ချက်” ++++++++++++++++++++++ ၀၁. ထမင်းစားနေချိန်မှာ ဖုန်းကိုခဏမေ့ထားပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲတမ်း ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အချိန်ကုန်မနေဘူးလား။ မိသားစုအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေအတွက် ဖုန်း ကို ဘေးချထားလိုက်ပါ။ ၀၂. ကီးမကိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ပါ။ သူတို့နဲ့ အတူတူသွားလာချိန်မှာ မပျော်ရင်တော့ သူတို့ကို အဆက်ဖြတ်ပါ။သင့်မှာအချိန်ဆိုတာ က အကန့်အသတ်မရှိသလို အားနာနေဖို့လည်း မလို ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့သူတွေအတွက် အချိန်ကို အလေးပေးပါ။ ၀၃. မနက်စောစောထပြီး တခုခုလုပ်ပါ။ နေ့တိုင်း အလုပ်တွေများပြီး ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကော…
admin October 5, 2017 October 5, 2017 Knowledge No Comments
မြန်​မာနိုင်​ငံက နျူကလီးယားပိုင်​ဆိုင်​ထုတ်​လုပ်​မှာကို ကမ္ဘာကဘာလို့ထိပ်​လန့် နေတာလဲ အ​ကြောင်းအရင်း
မြန်​မာနိုင်​ငံက နျူကလီးယားပိုင်​ဆိုင်​ ထုတ်​လုပ်​မှာကို ကမ္ဘာကထိပ်​လန့် နေတယ်​ ။နျူကလီးယား ပင်​မကုန်​ကြမ်း​တွေဆိုတာ မြန်​မာပြည်​တွင်းမှာအားလုံးရှိတယ်​အဲ့ဒါ​ကြောင့်​လဲ မြန်မာ့ နျူကလီးယား​စီမံကိန်း​တွေကို ကမ္ဘာကပိတ်​ဆို့တားမြစ်ခဲ့တာပါ ။အမေရိကန်​နိုင်ငံကထိပ်​​ဆုံး​ပေါ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို ဏ်ခတ် တယ် – ဒုက္ခပေးတာ အတော် များခဲ့ပြီ ။ မြောက်ကိုရီးယား ဝက်လေးက အာ့ကြောငအမေရိကန်နိုင်ငံကို အစာမကြေတာပါ ။ နိုင်ငံငယ် မှန်သမျှ ဝါးမြိုချင်တဲ့ အမေရိကန် ဗြိတိန် ။ ခေတ်အဆက်ဆက် လူကြီးတေဘယ်နိုင်ငံမှ ယုံကြည်မှု မရှိခဲ့တာ ။အမေရိကန်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ဒေါ်လာစား…
admin September 30, 2017 Knowledge No Comments
အကြွေးများ ကင်းရှင်းစေရန် ပုတီးစိပ်နည်း
အကြွေးများ ကင်းရှင်းစေရန် ပုတီးစိပ်နည်း ၇ရက်သားသမီးအပေါင်း အောင်စေ နိုင်စေ ပိုင်ကြပါစေ အကြွေးဆိုသည်မှာ ချစ်ကြွေး မုန်းကြွေး သံသရာ အကြွေး ရာဇဝင်ကြွေး သွေးကြွေး ငွေကြွေး စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ရှိကြသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အကြွေးမှန်ရင်တော့ တနေ့ ပေးဆပ်ကြရမည်။တစ်လုပ် စားဖူးသူ့ကျေးဇူးပင်။ ထိုအကြွေးများကို ကျေအောင်ဆပ်ကြ နောက်ဘဝတွေမှာ ထပ်မဆပ်ကြနဲ့…. ကျွန်ုပ်မှတ်သားဖူးသော အကြွေးကျေနည်း/အကြွေးဆပ်နိုင်အောင် ကုသိုလ် အထောက်ပံ့ရနည်းလေးကို ဖော်ပြပေးမယ်။မခက်သလို လုပ်ရမှာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ ************************************ နေ့အလိုက်သားသမီးတွေ…
admin September 29, 2017 September 29, 2017 Knowledge No Comments
စီးပွား​ရေးသမား လုပ်​​တော့မည်​ ဆိုပါလျှင်​
စီးပွား​ရေးသမား လုပ်​​တော့မည်​ ဆိုပါလျှင်​ ဒီ​နေ့ အလုပ်​​တွေလုပ်​ရင်း ညလုံး​ပေါက်​​နေလို့ မနက်​မိုးလင်းရင်​ ကိုယ်​ပိုင်​စီးပွား​ရေးလုပ်​ချင်​သူ​တွေ၊ လုပ်​​နေ​ပေမယ့်​ မ​အောင်​မြင်​တဲ့သူ​တွေ မှတ်​သားလိုက်​နာနိုင်​ဖို့ ​​စေတနာ​ရှေ့ထား မအိပ်​​သေးပဲရေး​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။ အတိအကျ​လေး အကျိုးရှိ​အောင်​ အိပ်​​ရေးပျက်​ခံ​ရေး​ပေးထားလို့ စာရှည်​သွားရင်​လည်း သည်းခံဖတ်​​ပေးပါလို့ :)အကျယ်​​တွေတအားချဲ့ရင်​လည်း ဖတ်​ရတာ ရှုတ်​သွားမှာဆိုးလို့ မကျဉ်းမကျယ်​ ​ရေးသား​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။ ​နောက်​ အချိန်​ရရင်​ ရသလို ​ခေါင်းစဉ်​ ၁ခုချင်းစီအလိုက်​ အကျယ်​ချဲ့​ရေးသား​ပေးသွားမှာဖြစ်​လို့ မရှင်းတာ၊ နားမလည်​တာ၊ သ​ဘောထားကွဲလွဲတာရှိမယ်​ဆိုရင်​လည်း မူရင်း Post မှာ Comment ​ပေခဲ့ပါ​နော်​ အချိန်​ရရင်​ ရသလိုပြန်​​ဖြေ​ပေးပါမယ်​။ ခ​ဏခဏ…
admin September 27, 2017 Knowledge No Comments
လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအတွက် အောင်မြင်မှုရစေနိုင်တဲ့ အချက် (21) ချက်
လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေအတွက် အောင်မြင်မှုရစေနိုင်တဲ့ အချက် (21) ချက် ======================== အမြဲသတိရပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဒီ Post ကို သင့်ရဲ့ Wall ပေါ်မှာ Share လုပ်ပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ။ (1) ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ပါ။ Richard Branson ကတော့ သူ့အတွက် စိတ်ခွန်အားပေးနိုင်တဲ့အရာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စိန်ခေါ်မှုပါပဲတဲ့။ ဘဝဆိုတာဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေ့လာသင်ယူစရာတွေ အများကြီးရှိတဲ့ တစ်သက်တာကျောင်းကြီးပါ။ မနေ့ကသင့်ကို ဒီနေ့သင်က စိန်ခေါ်ပြီး သူ့ထက်ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပါစေ။ _________________________ (2)…
admin September 25, 2017 Knowledge No Comments
အမေ ကို ထမင်းတစ်နပ်ကျွေးရုံနဲ့ အောင်မြင်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) ဦးသုခ
Knowledge ကိုလိုနီခေတ်တုန်းက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျိုက်လတ်မြို့မှာ သိန်းမောင်ဆိုတဲ့ စာပေဝါသနာရှင် လူငယ်တစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ သိန်းမောင်မှာ အမေတစ်ခု သားတစ်ခုဖြစ်လို့ အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်နေတဲ့ မိခင်အိုကြီးကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေခဲ့ရတယ်။ နယ်မြို့မှာနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်တဲ့ စာရေးဆရာဖြစ်ရမယ်လို့ ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးမားမား ရှိခဲ့တယ်။ ရည်မှန်းချက်ကို မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့အဆုံး သိန်းမောင်ဟာ ရန်ကုန်ကို သွားချင်တဲ့အကြောင်း မိခင်ဆီကို အသိပေးလာတယ်။ “အမေ သားတို့လို အနုပညာဝါသနာပါသူတွေ အတွက် ရန်ကုန်မြို့ဟာ အောင်မြေဖြစ်လို့ ရန်ကုန် ကို သွားချင်တယ်” “ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲ ငါ့သားရယ်… ကြံကြံဖန်ဖန်ကွယ်…
admin September 24, 2017 Knowledge No Comments